Guddoomiyaha Aqalka Sare oo nasiib-darro ku tilmaamay go’aanka xukuumadda ee ahaa doorasho hal dhinac ah – Kalfadhi
January 10, 2021 January 10, 2021 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi oo ay wehliyaan siyaasiyiinta, dhaqanka iyo waxgaradka ka soo jeeda Gobolada Waqooyi ee Somaliland oo maanta soo saaray war-saxaafadeed ayaa sheegay inay ka xun yihiin, isla markaana ku tilmaamay nasiib-darro weyn in Xukuumadda ku dhawaaqdo inuu dalka doorasho galayo, si wakhti loo luminin.
Guddoomiyaha iyo xubnaha kale ayaa sheegay in ay mar kale ka digayaan cawaaqib xumada ka dhalan karta qabashada doorasho aan heshiis lagu ahayn ama aan laga qabaneyn dalka oo dhan isku mar, taas oo ay shegeen in ay dhabar jab ku noqoneyso midnimada dalka, wadajirka ummadda iyo dib-u-dhismaha dowladnimada Soomaaliya.
Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka ayaa maalmo ka hor beeniyay in Ra’iisul wasaare ku-xigeenka iyo Guddoomiyaha Aqalka Sare, ay xal ka gaareen muranka ka taagan guddiga maamulaya doorashada Goboladda Waqooyi ee Soomaaliya.
Shirkii madasha Heritage ee Garowe kaddib, waxaa soo shaac-baxday in afar xubnood oo ka socota dhanka Guddoomiye Cabdi Xaashi loogu dari doono Guddiga doorashada xubnaha Goboladda Waqooyi, sidaasina lagu xalin doono murankii ka taagnaa guddiga.
Waa maxay talada midowga musharraxiinta kaddib go’aankii xukuumadda ee shalay?